China Graphite Rod နှင့် Carbon Rod စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ hexi
Hexi Carbon ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သော Graphite ချောင်းများသည်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှု၊ အပူစီးကူးမှု၊ ချောဆီနှင့်ဓာတုတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ သတ္တုလုပ်ငန်း၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပုံသွန်း၊ သံမဏိသတ္တုစပ်၊ ကြွေထည်မြေထည်ပစ္စည်း၊ ဆေးဝါး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးစသည်တို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သောဂရစ်ဖိုက်အများစုသည်အပူချိန်မြင့်လေဟာနယ်မီးဖိုများတွင်လျှပ်စစ်အပူပေးအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဖောက်သည်များအသုံးပြုကြသည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်သောအပူချိန်သည် ၃၀၀၀ reach အထိရောက်ရှိနိုင်သည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူခုခံမှုနှင့်အအေးခံနိုင်မှု၊ သေးငယ်သောအပူတိုးချဲ့မှုကိန်း၊ ကြီးမားသောအပူစီးကူးမှုကိန်းနှင့်ခံနိုင်ရည် (၈-၁၃) × ၁၀-၆ Ωမီတာ။
1. မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်: အမှတ် 3850 ℃ 50 m အရည်ပျော်
2. Thermal shock resistance: ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သော shock shock ခုခံနိုင်မှုနှင့်သေးငယ်သည့်အပူချဲ့ထွင်မှုကိန်းရှိပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်
3. ထူးကဲသောအပူနှင့်လျှပ်စစ်စီးကူး။ ၎င်း၏အပူစီးကူးမှုသည်သံမဏိထက် ၄ ဆပိုမိုမြင့်မားပြီးကာဗွန်သံမဏိထက် ၂ ဆပိုမိုမြင့်မားပြီးသာမာန်မဟုတ်သောသံထည်များထက်အဆ ၁၀၀ ပိုမိုမြင့်မားသည်။
၄။ ချောမွေ့မှု - ဂရစ်ဖိုက်၏ချောမွေ့မှုသည် molybdenum disulfide နှင့်တူသည်၊ ပွတ်တိုက်မှုကိန်းသည် ၀.၁ ထက်နည်းသည်၊ ၎င်း၏ချောမွေ့မှုသည်အရွယ်အစားနှင့်ကွဲပြားသည်။ အချိုးပိုကြီးလေလေပွတ်တိုက်ကိန်းနည်းလေလေချောဆီပိုကောင်းလေဖြစ်သည်
၅။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု - ဖိုက်သည်အခန်းအပူချိန်တွင်ကောင်းမွန်သောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးအက်ဆစ်၊ အယ်လကာလီနှင့်အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
Hexi ကာဗွန်သည်ဂရပ်ဖိုက် / ကာဗွန်၏ခိုင်မာသောထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖောက်သည်များ၏လျှောက်လွှာများအရကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရစ်ဖိုက်ချောင်းများထုတ်လုပ်နိုင်သည့်စိတ်ကြိုက်ဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အရွယ်အစားများကိုပေးသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောကာဗွန်ချောင်းများသည်အချင်း ၅၀ မှ ၁၂၀၀ မီလီမီတာအထိရှိသည်။
နောက်တစ်ခု: Graphite Block & Graphite Cube